Dzosera & Dzosera - Trivoshop
musha Dzorera & Kudzorera
Dzorera & Kudzorera
Kudzoka & Kudzosera, Dhirivhari Policy
Vatengesi vanogona (kunyanya kune echinyakare maodha) inoda imwe yekugadzirisa nguva isati yatumirwa kwechinhu. Vatengi vachaziviswa mune aya mamiriro. Avhareji yekugadzirisa nguva kubva kune vanotengesa masosi pakati pe1 kusvika mazuva gumi. Zvichienderana nekuenda mukati meUS kana International, ndapota tendera pakati pe10 kusvika makumi matatu mazuva kuti odha yako isvike Chigadzirwa odha mukati meUS ane anokurumidza nguva mafuremu.
Mutemo unotora kwemazuva makumi matatu kubva pakugamuchira odha yako. Mirairo kunze kwenguva iyoyo haigone kudzoserwa kana kuchinjaniswa. Kudzorera chinhu (s) kunofanirwa kusashandiswa uye mune yepakutanga mamiriro ane epakutanga kurongedza. Kusunungurwa kubva kudzoka: Zvinhu zvinoparara sekudya, maruva, mapepanhau kana magazini hazvigone kudzoserwa.
Isuwo hatigamuchire zvigadzirwa zviri zvepedyo kana zvehutsanana zvinhu, zvine ngozi zvinhu, kana zvinopisa zvinwiwa kana magasi. Zvimwe zvinhu zvisingadzoreke: Makadhi echipo Anogoneka software zvigadzirwa Zvimwe zvehutano uye zvekuchengetedza zvinhu Kuti upedze kudzoka kwako, tinoda risiti kana humbowo hwekutenga. Ndokumbirawo usatumire kutenga kwako kumashure kumugadziri. Kune mamwe mamiriro ezvinhu uko kupihwa mari shoma inopihwa (kana zvichibvira) Bhuku rine zviratidzo zviri pachena zvekushandisa CD, DVD, VHS tepi, software, vhidhiyo mutambo, kaseti tepi, kana vinyl rekodhi yakavhurwa Chero chinhu chisiri muchimiro chayo chepakutanga, yakakuvara kana kushayikwa zvikamu zvezvikonzero kwete nekuda kwekukanganisa Chero chinhu chinodzoserwa anopfuura mazuva makumi matatu mushure mekusvitswa Refunds (kana zvichibvira)
Kamwe kudzoka kwako kuchinge kwagamuchirwa nekuongororwa, isu tinokutumira iwe email yekukuzivisa iwe kuti tagamuchira chinhu chako chakadzorerwa. Isu tichakuzivisawo nezve kubvumidzwa kana kurambwa kwekudzoserwa kwako. Kana iwe ukatenderwa, ipapo yako yekudzosera ichagadziriswa, uye kiredhiti ichazongoerekana yaiswa kune yako kiredhiti kadhi kana yekutanga nzira yekubhadhara, mukati meimwe huwandu hwemazuva. Kunonoka kana kushaikwa kudzoreredzwa (kana zvichibvira) Kana usati wagamuchira mari yacho, tanga watarisa kubhengi yako account zvakare. Wobva wabatana nekambani yako yekadhi rechikwereti, zvinogona kutora imwe nguva kuti mari yako isati yatumirwa zviri pamutemo. Tevere bata bhanga rako. Iko kunowanzo kuve nenguva yekugadzirisa pasati padzoreredzwa kutumirwa. Kana iwe waita zvese izvi uye usati wagamuchira yako yekudzoserwa parizvino, ndapota taura nesu ku info@trivoshop.com.
(kana zvichibvira) Zvinhu zvemutengo zvega zvega zvinogona kudzoserwa, zvinosuwisa kuti zvinhu zvekutengesa hazvigone kudzoserwa. Shanduko (kana zvichibvira) Isu tinongotsiva zvinhu kana zvisina kukwana kana kukuvara. Kana iwe uchida kuchinjanisa icho chinhu chimwe chete, titumire email pa info@trivoshop.com uye tumira chinhu chako ku:
Trivoshop Inc- Inodzoka
Kana icho chinhu chakatarwa sechipo kana chakatengwa uye chakatumirwa zvakananga kwauri, iwe unogashira chipo chechikwereti kune kukosha kwekudzoka kwako. Kana chinhu chakadzoserwa changogamuchirwa, chitupa chechipo chinozotumirwa kwauri. Kana chinhu chacho chisina kumakwa sechipo kana chatengwa, kana mupi wechipo akange atumirwa odha yavo kuti vape kwauri gare gare, isu tinotumira iyo yekudzosera kune iye anopa chipo uye iye anozoziva nezve kudzoka kwako. Kutumira Kuti udzore chigadzirwa chako, unofanirwa kutumira chigadzirwa chako ku:
Iwe uchave nebasa rekubhadhara iwe wega mari yekutumira yekudzosera chinhu chako. Mari yekutumira haina kudzoserwa.
Kana iwe ukatambira kudzoserwa, mutengo wekudzorera kutumira unozobviswa kubva kune yako kudzoserwa. Zvichienderana nekwaunogara, iyo nguva inogona kutora kuti chako chakatsinhaniswa chigadzirwa kuti chikusvike kwauri, chingasiyana. Mari yekudzoreredza inogona kunyorera zvichienderana nemamiriro ezvinhu echirairo kana chinhu chiri kudzimwa kana kudzorerwa. Kana iwe uri kutumira chinhu pamusoro pe $ 75, iwe unofanirwa kufunga nezvekushandisa trackable sevhisi sevhisi kana kutenga inishuwarenzi yekutakura. Isu hativimbise kuti isu ticha gamuchira chinhu chako chakadzoserwa.